Tsy mbola fantatra mazava anefa hatreto ny isan’ireo filoham-panjakana ho avy hanatrika izany. Manodidina ny 30 ireo filoham-pirenena sy lehiben’ny governemanta na solontenany, araka ny nohamafisin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny Malagasy Atallah Béatrice omaly tamin’ny famaranana ny filankevitry ny minisitra frankofonina teny Ivato. Handrasana anio zoma avokoa moa ny ankamaroan’ireo vahiny manan-kaja samihafa raha ny sabotsy maraina vao hanitsaka ny seranam-piaramanidina iraisampirenena eny Ivato kosa ny filoham-pirenena frantsay François Hollande. Efa fomba fiasa tsikaritra hatrany am-panombohana moa ny fanomezam-baovao manjavozavo. Ny alarobia teo, ohatra, vao nivoaka ny tarehimarika 7 tapitrisa euros tetibola fanomanana ny fampiantranoan’i Madagasikara ity fivoriana iraisampirenena iombonan’ireo tany mpikambana frankofonina ity izay nankatoavina tamin’ny volana novambra 2015. Izay tokoa angaha no tonga amin’ny fiteny frantsay fampiasa matetika hoe «Mieux vaut tard que jamais» na ilay hoe aleo tara toy izay tsy misy.